SHIRQOOLKA KA SOCDA NAIROBI IYO DABIN SIYAASADEED OO LOO DHIGAYO XUKUUMADDA KHEYRE – Puntland Voice
SHIRQOOLKA KA SOCDA NAIROBI IYO DABIN SIYAASADEED OO LOO DHIGAYO XUKUUMADDA KHEYRE
February 8, 2018 7:13 am Views: 34
Iyadoo maalmihii ugu dambeeyay magaalada nairobi ay ku qul qulayeen xildhibaanno labada aqal ka tirsan oo mucaaradsan dowladda madaxweyne farmaajo ayaa waxaa la sheegay in kulamo siyaasadeed oo waaweyn ay magaalada ka socdaan.
Madaxweynihii hore ee soomalia xasan shiikh maxamuud ayaa soo gaaray nairobi iyadoona ay xusid mudantahay in halkaa ay kusoo dhaweeyeen xildhibaanada ugu waaweyn mucaaadka farmaajo sida mahad salaad, senator abshir bukhaari, xildhibaan C/qaadir cosoble iyo xubno kaloo badan.
Xubnahaan nairobi isugu tagay ayaa diyaarinaya qorsha lagu hirgalin lahaay mooshin culus oo ka dhan ah xukuumadda Nabad iyo Nolol ee uu hogaamiyo Ra’isul wasaare xasan cali kheyre iyadoona xubnahaan ay qorsheynayan marka uu furmo kal-fadhiga baarlamaanka laga dhigo ajandayaasha ugu horeeyo ee xildhibaanadu ay ka doodi doonan.
Xasan shiikh in uu qeyb ka yahay ol’olahaan ka dhanka ah xukuumadda kheyre lama oga balse Hadda nairobi ayuu ku suganyahay waxaana uu kulamo albaabada u xiran kula jiraa xildhibaanada mucaaradka oo mahad salaad iyo abshir bukhaari ay kaaboyaal u yihiin .
Waxaa kaloo la filaya in maalmaha soo socda ay nairobi gaaraan siyaasiyiin iyo xildhibaano mucaarad ah oo hadda muqdisho ku sugan.
Wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha khadiija diiriye ayaa kamid ah xubnaha nairobi ku sugan ee kulanka la qaatay xasan shiikh.
Sidoo kale Nairobi waxaa shalay gaaray Guddoomiyihii hore ee gobolka banaadir thabit cabdi oo dhawaan khilaaf soo kala dhexgalay isaga iyo kheyre uu ku waayay xilkii guddoomiyaha gobolka banaadir.
Thabit isagana sababta uu nairobi u tagay xog lagama helin balse warar hoose ayaa sheegaya in xubnaha mucaaradka ay ka faa’iideysanayan khilaafka thabit iyo kheyre dhexmaray ayna doonayan in thabit ay la heshiisiiyaan xasan shiikh oo ay horay isugu dhaceen xiliguu uu socday ol’olahii doorashada ee uu ku guuleystay madaxweyne maxamad c/llahi farmaajo.
Nairobi waxa ay noqotay meel laga soo abaabulo mooshinada laga keeno xukuumadda hadda jirta iyo xukuumaddihii horay waxaana nairobi ay saldhig u tahay xildhibaanada mucaaradka ah ee dhaliilsan dowladda .
La soco kulamada dhici doona iyo wixii lagu go’aamiyo.